ऋषि जी ! तपाइलाई मुरी मुरी धन्यवाद ! मलाई फेरी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनाउनुभएकोमा – YesKathmandu.com
काठमाडौं । आफू भन्दा ठूला बडा वा अरु कसैले तपाइलाई ठूलो मानिस बन्नु, प्रधानमन्त्री बन्नु भनेर आशिक दिँदा पुग्छ होला र ? तर बालुवाटार निवासी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनाउन पत्रकार ऋषि धमलाले आशिक दिएको समाचार बाहिर खुल्न आएको छ ।
आइतबार बिहान रिपोर्टर्स क्लब नेपालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देउसी–भैलो कार्यक्रम गरेको थियो । देउसी भैलौ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित रिपोर्टस क्लव नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका ऋषि धमला दुवैले कम्मर मर्काउदै नाचेका थिए ।
नाचका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने–‘फेरि पनि यहाँ आएर आशीर्वाद दिनुभएको छ, त्यसका लागि मुरी मुरी धन्यवाद ।’ गत साल तपाईंहरु यहाँ आएर देउसी भैलो खेल्दा दिनुभएको आशिक मलाई ठ्याम्मै लागेको छ । दीपावलीको उपलक्ष्यमा आशिष् दिने प्रक्रिया चलिराखोस् शुभकामना । यससँगै भैली खेल्न पुगेको धमला नेतृत्वको टोलीसँग प्रचण्ड केहीबेर नाचेका थिए ।
प्रचण्डलाई गत वर्ष ऋषि धमला अध्यक्ष रहेको रिपोर्टर्स क्लबको देउसी भैलोमा प्रधानमन्त्री बन्ने आशिक दिएको थियो । नभन्दै त्यो आशिक प्रचण्डलाई पुगेको छ । अहिले उनी दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने मौंका पाएका छन् ।
उक्त देउसी भैंलो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालीहरुबीच नराम्रोको निम्ति प्रतिसपर्धा गर्ने खतरा पैदा भएको बताए । उनले तिहारले नेपालीहरुमा सकारात्मक भावना जगाउने अपेक्षा समेत व्यक्त गरे ।प्रचण्डले आफू संविधानको स्वीकार्यता बढाएर निर्वाचन गराउने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्री भएको भन्दै त्यसका लागि खटिरहेको टोलीलाई जानकारी गराए।
संविधान संशोधन लगायतका विषयमा आज ४ बजे मधेसी मोर्चासँग औपचारिक वार्ता हुन लागेको समेत जानकारी गराएका थिए । उनले आफू अहोरात्र खटेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागिपरेको बताए ।